Fitaovana - Fujian Shengyang Pipeline Technology Co., Ltd.
Ny tsipika famokarana fantsom-bokatra vaovao natsangan'i Shengyang Technology dia mety amin'ny famoahana fantsona polyolefin isan-karazany. Ny tsipika famokarana dia manana automatique avo lenta, famokarana marin-toerana sy azo itokisana, ary afaka manome soso-kevitra anatiny sy ivelany soso-kevitra ary fantsona fantsom-pifangaroana multilayer ho an'ny fantsom-by lehibe.
Shengyang Technology dia manana milina fanefitra mandroso miaraka amin'ny fanaraha-maso mazava tsara, avo lenta ary kalitao milamina. Misy setela feno lasitra fantsom-pifandraisana mifanaraka amin'ny paompy azo ampiasaina ho an'ny mpanjifa.
Fitaovana fantsom-panazavana marobe azo zahana amin'ny fenitra feno vita amin'ny fantsom-pifandraisana.
Shengyang Technology dia mampihatra mafy ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2008 ary manome lanja ny fanaraha-maso ny fizotrany. Mba hahazoana antoka ny teboka fanombohana avo, fenitra avo lenta, ny ivon-toeram-pitsapana dia manana fitaovana fitiliana feno sy fanandramana. Manomboka amin'ny akora hatramin'ny vokatra vita, ny fanaraha-maso hentitra dia atao isaky ny 8 ora. Fitsapana ny fitsapana ny fiantraikan'ny tantanana sy ny fanadinana Vicat. Ireo fitsapana ireo dia manome antoka fa mampiasa akora tsara kalitao avo indrindra izahay ary mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny fenitra. Ny vokatra "Shengyang" dia voamariky ny fiovan'ny famokarana sy ny daty famokarana mba hahafahana manara-maso sy manara-maso ny kalitaon'ny vokatra.